La soco Xawaaraha Goobta oo leh Torbit Insight
Arbacada, Juun 6, 2012 Isniin, February 1, 2016 Douglas Karr
Goobtu si gaabis ah ayey u socotaa Kuuma sheegi karo inta jeer ee aan helay farriintan sanadihii la soo dhaafay markaan la shaqeynayay macaamiisha. Xawaaraha goobtu waa mid aad muhiim u ah… waxay yareyn kartaa buunshada, ku sii hayn kartaa dadka soo booqda, waxay ka dhigeysaa bartaada mid ka sii wanaagsan Google, ugu dambeyntiina u horseedaysa beddelaad badan. Waxaan jecel nahay baraha deg deg ah… waa mid ka mid ah arimaha ugu horeeya ee aan ku weerareyno macmiil (iyo sidoo kale sababta aan u martigelinay) WordPress on Flywheel - taasi waa xiriir xiriiriye).
Helitaanka qoraal ah goobta waa gaabis waa jahwareer maxaa yeelay waxay ku saleysnaan kartaa boqolaal arrimood… imisa xaddiga ballaadh ee shirkaddaadu leedahay, imisa qof ayaa isticmaaleysa, soo degsashadaada asalka ah ee aad sameyneyso, biraawsarka aad maamusho, biraawsarka add-ons ayaa socda, hadday tahay goob ammaan ah, oo meelihii lagu marti geliyey, meesha degelku martigeliyay, imisa goobood oo kale ayaa isla goobtaas lagu raray, sida serverkaagu u kaydinayo goobta iyo haddii aad u qaybisay kheyraad ma guurto ah CDN la magacaabo wax yar.
Suuragal maaha in la sheego waxa dhibaatadu noqon karto markay macaamiisheennu nala soo xiriiraan oo ay na weydiiyaan. Marka, waxaan guud ahaan booqanaa bogagga sida Pingdom oo socodsiiya xoogaa qalab xawaare ah oo u caddee in qof kasta oo iyaga ka baxsan uusan wax dhibaato ah qabin. Dabcan, taasi waa marka ay soo noqdaan oo ay noo sheegaan in qof kasta oo ay garanayaan uu dhibaato haysto, sidoo kale igh taah.
Falanqaynta xawaaraha boggaaga adoo adeegsanaya Google Search Console (qeybta sheybaarada) waa kaftan… waxay kuxirantahay dadka wata bar toolmoon inay soo sheegaan xawaaraha. Runtii ma jiraan meelo aad u tiro badan oo aad aadi karto si aad jawaab run ah uga hesho. Mise waa jiraa? Fahanka Torbit waa aalad qiyaasta isticmaale dhab ah oo ku dareysa daahfurnaanta boggaaga ma bixin karto oo keliya jawaabta, laakiin sidoo kale xalka. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad jarjarto oo aad jajabiso labadaba martidaada iyo boggaaga si aad u aragto sawir dhab ah xawaaraha bartaada.
Fahanka Torbit wuxuu sameeyaa cabbiraadaha cabbiraadda isticmaalaha ee dhabta ah, taasoo u oggolaanaysa suuqyadu inay kormeeraan waqtiyada dhabta ah ee websaydhka xamuul kasta iyo booqde kasta. Qalabku wuxuu hoos u dhigayaa macluumaadka si uu u tilmaamo halka saxda ah ee boggu u noqonayo mid gaabis ah, iyo sababta. Xallinta hal-labaad waxay ka dhigeysaa xogta la heli karo waqtiga dhabta ah.
Qalabku wuxuu bixiyaa maadooyin dareen leh sida isku xirnaanta udhaxeysa xawaaraha websaydhka iyo heerarka boodboodka ama heerarka beddelaadda, ka warbixinta waqtiga dhabta ah ee muuqaalka khariidadda tooska ah, histogaraam ee xilliyada culeyska isticmaalaha ee leh cabbiraadaha sida dhexdhexaadka iyo boqolleyda ugu sareysa daalacashada iyo juqraafi ahaan, iyo talooyin loo habeeyay oo ku saabsan sida loo wanaajiyo wax qabadka, dhammaantoodna 100 boqolkiiba laga qaadanayo. Hadana haddii aad socodsiiso degel WordPress ah, waad kici kartaa oo si dhakhso leh ayaad ula socon kartaa ay WordPress Plugin.
Macluumaadkan, waxaad hadda ku garan kartaa in koodhkii ugu dambeeyay ee la geeyay uu ka dhigay websaydhkaaga mid gaabis badan, haddii asalka uu yahay adeege culeys badan, ama… kaliya u caddee macmiilkaaga inaad howshaada qabaneyso iyo in barta ay si fiican u shaqeyneyso.
Sidoo kale waa wax cajiib ah in la fiirsado waqtiyada culeyska juqraafi ahaan, sidoo kale!
Qiimuhu sidoo kale waa sax. Nooca aasaasiga ah ee Fahanka Torbit, oo ay ku jiraan boqolleyda 100 boqolkiiba illaa 1,000,000 aragtida bogga billaha ah iyo 30 maalmood xogta haynta, ayaa gebi ahaanba bilaash ah. Haddii aad jeclaan lahayd inaad hoos ugu dhaadhacdo arrimaha, u fiirso booqashooyinkaaga ugu fiican iyo kuwa ugu xun, ama xitaa la soco beddelaadda waqtiga xamuulka, qalabku wuxuu u baahan yahay casriyeyn.
Tags: flywheelgoogle webmastersbogag lehkormeerka xawaarahakormeerka xawaarahacilad bixinta xawaarahaqiiqaragtida qiiqwpengine
Ku fur Bakhaarka Facebook 15 Daqiiqo oo leh bixinta
Miyay tahay inaad dhisto barnaamij moobil ama degel mobilaad ah?
Waad ku mahadsan tahay macluumaadkan Doug, tani runti waa adeeg aad u qabow iyadoo la tixgelinayo sicirka qiimaha.
Waxaad sharad @ twitter-353825851: disqus! Waxaan u maleeyay sidaas, sidoo kale !!!
Jun 7, 2012 saacadu markay ahayd 9:34 AM
Runtii ma dhayalsan kartid muhiimadda waqtiga rarka ee boggaaga. Xitaa haddii waxyaabahaaga iyo naqshadeyntaadu fiican yihiin, haddii ay si tartiib ah u rarto waxaad waayi doontaa booqdayaasha. Mashiinnada raadintu waxay doorbidaan bogagga internetka ee bixiya khibrad isticmaale wanaagsan.
Jun 9, 2012 saacadu markay ahayd 2:34 AM
Doug, Waa wax weyn inaad maqasho inaad isticmaaleyso Torbit Insight oo aad u aragto inay faa'iido leedahay. Waad ku mahadsan tahay maqaalka!